Shan Jago oo ka bannaan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya [Akhriso] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaan idin soo gudbinayaa shaqooyin ka banaan Golaha Aqalka Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
Fadlan fiiri shuruudaha looga baahan yahay ilaa lix jago oo ah maamulka. Waxaa dhowaan la soo xayeysiin doonaa kuwa kale oo shaqaalaha Aqalka ka tirsan Insha Allah.
3- AGAASIMAHA WAAXDA MAAMULKA, MAALIYADDA IYO SAHAQAALAHA:-
4- AGAASIMAHA WAAXDA QORSHAYNTA SAXAAFADDA IYO TIKNoOLOJIYADDA (ICT):-
 Inuu aqoon fiican u leeyahay, taariikhda iyo juquraafiga Somaliya.
Dadka daneynaya waxay ku soo codsan karaan qaab online ah oo keliya. Waxaa lala soo xiriirayaa oo keliya dadka ku soo baxa liiska gaaban. Fadlan ku soo dir codsigaaga, Taariikh nololeedkaaga iyo nuqul shahaadooyinkaaga ka mid ah emailkan: senatesom@gmail.com. Fadlan cinwaanka codsigaaga ka dhig jagada aad soo codsanayso iyo numberka tixraaceeda. Gabdhaha leh takhasuska iyo khibrada loo baahan yahay waxaa lagu boorinayaa inay soo codsadaan ugu dambeyn codsigaaga soo dir 24 April 2017 4:00pm.
Previous articleQaadkii imaan jiray Muqdisho oo khilaaf dartii loogu wareejiyay Magaalada Jowhar
Next articleAKHRISO: Ra’iisal wasaare Kheyre oo Afar Arrimood ka bedelay Xafiiskiisa & Qodob ka hor yimid